ယောင်းတို့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဒီတစ်ပတ် Billboard မှာ ဟော့အဖြစ်ဆုံး သီချင်း (၁၀) ပုဒ် - For her Myanmar
Top Ten နေရာကသီချင်းတွေမှ နားမထောင်ရင် မိုက်မဲရာကျသွားမှာပေါ့
ယောင်းတို့ရေ…နားထောင်နေကျသီချင်းတွေချည်းပဲ နားထောင်နေရတာရိုးအီနေပြီလား ? အသစ်အသစ်တွေထွက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့ရလေအောင် billboard မှာ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း top ten နေရာက ဦးဆောင်နေတဲ့ သီချင်းတွေကို stella က ပြောပြပေးသွားမယ်နော်။
(၁၀) Travis Scott – Sicko Mode
နံပါတ် (၁၀) နေရာမှာတော့ “Sicko Mode” သီချင်းရှိနေပါတယ်။ Kylie Jenner ရဲ့ချစ်သူ Travis Scott သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး Drake ကလည်း ပါဝင်အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
(၉) Middle Child – J. Cole
အမေရိကန်ရက်ပ်ပါ J. Cole ရဲ့ “Middle Child” သီချင်းကတော့ နံပါတ် (၉) နေရာကနေ တော်တော်ပေါက်နေပါတယ်။ ယောင်းက ရက်ပ်တွေကြိုက်နှစ်သက်သူဆိုရင်တော့ ဒီသီချင်းကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၈) Happier – Marshmello & Bastille
DJ Marshmello ရဲ့ “Happier” က ဒီတစ်ပတ်အတွက် နံပါတ် (၈) နေရာကို လျှောကျသွားပါတယ်။ “Happier” ကို နားထောင်မိရင် သူ့ရဲ့ Mtv လေးကိုပါ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Related article >>> စာဂျပိုးတို့အတွက် အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထု(၃)အုပ်
(၇) Wow – Post Malone
လူငယ်ကြိုက်အဆိုတော် Post Malone ရဲ့ “Wow” သီချင်းက ဒီတစ်ပတ်မှာ အပေါ်ကိုတစ်ဆင့်တက်လာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသီချင်းက Billboard Top 100 chart မှာ ရှိနေတာ (၁၁) ပတ်တောင် ရှိနေပါပြီ။
(၆) Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper
၂၀၁၉ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ Best Original Song ဆုရရှိထားတဲ့ “Shallow” က “A Star Is Born” ရုပ်ရှင်ကားထဲက Lady Gaga နဲ့ Bradley Cooper ရဲ့ သီချင်းလေးပါ။ လူတော်တော်များများရဲ့အသည်းကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းမို့ နားထောင်ဖြစ်အောင်နားထောင်လိုက်နော်။
(၅) Without Me – Halsey
Halsey ရဲ့ “Without Me” သီချင်းက အရင်တစ်ပတ်နံပါတ်သုံးနေရာမှာ ရှိနေရာမှ အခုတစ်ပတ်မှာ နံပါတ် (၅) နေရာကို ရောက်သွားပါတယ်။ အသည်းကွဲနေတဲ့ ယောင်းတို့ အကြိုက်တွေ့လောက်မယ် ထင်ပါရဲ့။
(၄) Sunflower – Post Malone & Swae Lee
Spider-Man: Into The Spider-Verse ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းဖြစ်တဲ့ “Sunflower” က ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ နံပါတ် (၄) နေရာမှာပါ။ Post Malone နဲ့ Swae Lee တို့ရဲ့သီချင်းဖြစ်တာကြောင့် လူငယ်ကြိုက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
(၃) Please Me – Cardi B & Bruno Mars
“Please Me” သီချင်းဟာ အရင်တစ်ပတ်က နံပါတ် (၁၄) နေရာမှာ ရှိနေရာမှ အခု နံပါတ် (၃) ကို ခုန်တက်လာတာပါ။ Bruno Mars နဲ့ Cardi B သီဆိုထားတာမို့ ယောင်းတို့အကြိုက်တွေမှာ သေချာပါတယ်။
(၂)7Rings – Ariana Grande
ချစ်စရာ ပေါ့ပ် အဆိုတော်မလေး Ariana Grande ရဲ့ “7 Rings” သီချင်းကတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း နံပါတ် (၂) နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။
(၁) Suckers – Jonas Brothers
၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် Jonas Brothers က ခြောက်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ပထမဆုံးသီချင်းဖြစ်တဲ့ “Suckers” နဲ့ billboard နံပါတ်(၁) နေရာကို သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ဒီတစ်ပတ်အတွက် နားထောင်စရာသီချင်းတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ရလောက်ပြီပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်ကြရအောင်။ နောက်တစ်ပတ်မှ ထပ်တွေ့ကြမယ်။
Top Ten နရောကသီခငျြးတှမှေ နားမထောငျရငျ မိုကျမဲရာကသြှားမှာပေါ့
ယောငျးတို့ရေ…နားထောငျနကေသြီခငျြးတှခေညျြးပဲ နားထောငျနရေတာရိုးအီနပွေီလား ? အသဈအသဈတှထှေကျနတေဲ့ခတျေကွီးမှာ နောကျကမြကနျြခဲ့ရလအေောငျ billboard မှာ ဒီတဈပတျအတှငျး top ten နရောက ဦးဆောငျနတေဲ့ သီခငျြးတှကေို stella က ပွောပွပေးသှားမယျနျော။
နံပါတျ (၁၀) နရောမှာတော့ “Sicko Mode” သီခငျြးရှိနပေါတယျ။ Kylie Jenner ရဲ့ခဈြသူ Travis Scott သီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈပွီး Drake ကလညျး ပါဝငျအားဖွညျ့ပေးထားပါတယျ။
အမရေိကနျရကျပျပါ J. Cole ရဲ့ “Middle Child” သီခငျြးကတော့ နံပါတျ (၉) နရောကနေ တျောတျောပေါကျနပေါတယျ။ ယောငျးက ရကျပျတှကွေိုကျနှဈသကျသူဆိုရငျတော့ ဒီသီခငျြးကို နားထောငျကွညျ့လိုကျပါ။
DJ Marshmello ရဲ့ “Happier” က ဒီတဈပတျအတှကျ နံပါတျ (၈) နရောကို လြှောကသြှားပါတယျ။ “Happier” ကို နားထောငျမိရငျ သူ့ရဲ့ Mtv လေးကိုပါ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
Related article >>> စာဂပြိုးတို့အတှကျ အင်ျဂလိပျဝတ်ထု(၃)အုပျ
လူငယျကွိုကျအဆိုတျော Post Malone ရဲ့ “Wow” သီခငျြးက ဒီတဈပတျမှာ အပျေါကိုတဈဆငျ့တကျလာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီသီခငျြးက Billboard Top 100 chart မှာ ရှိနတော (၁၁) ပတျတောငျ ရှိနပေါပွီ။
၂၀၁၉ အျောစကာဆုပေးပှဲမှာ Best Original Song ဆုရရှိထားတဲ့ “Shallow” က “A Star Is Born” ရုပျရှငျကားထဲက Lady Gaga နဲ့ Bradley Cooper ရဲ့ သီခငျြးလေးပါ။ လူတျောတျောမြားမြားရဲ့အသညျးကို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးမို့ နားထောငျဖွဈအောငျနားထောငျလိုကျနျော။
Halsey ရဲ့ “Without Me” သီခငျြးက အရငျတဈပတျနံပါတျသုံးနရောမှာ ရှိနရောမှ အခုတဈပတျမှာ နံပါတျ (၅) နရောကို ရောကျသှားပါတယျ။ အသညျးကှဲနတေဲ့ ယောငျးတို့ အကွိုကျတှလေ့ောကျမယျ ထငျပါရဲ့။
Spider-Man: Into The Spider-Verse ရုပျရှငျထဲက ဇာတျဝငျသီခငျြးဖွဈတဲ့ “Sunflower” က ဒီတဈပတျရဲ့ နံပါတျ (၄) နရောမှာပါ။ Post Malone နဲ့ Swae Lee တို့ရဲ့သီခငျြးဖွဈတာကွောငျ့ လူငယျကွိုကျသီခငျြးတဈပုဒျပါပဲ။
“Please Me” သီခငျြးဟာ အရငျတဈပတျက နံပါတျ (၁၄) နရောမှာ ရှိနရောမှ အခု နံပါတျ (၃) ကို ခုနျတကျလာတာပါ။ Bruno Mars နဲ့ Cardi B သီဆိုထားတာမို့ ယောငျးတို့အကွိုကျတှမှော သခြောပါတယျ။
ခဈြစရာ ပေါ့ပျ အဆိုတျောမလေး Ariana Grande ရဲ့ “7 Rings” သီခငျြးကတော့ ဒီတဈပတျမှာလညျး နံပါတျ (၂) နရောမှာ ရှိနပေါတယျ။Related article >>> ဖကျရှငျခဈြသူ ယောငျးယောငျးတို့ မဖွဈမနေ ကွညျ့ထားသငျ့တဲ့ ရုပျရှငျ (၅) ကား
၂၀၀၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော Jonas Brothers က ခွောကျနှဈကွာပွီးတဲ့နောကျမှာ ပထမဆုံးသီခငျြးဖွဈတဲ့ “Suckers” နဲ့ billboard နံပါတျ(၁) နရောကို သိမျးပိုကျထားပါတယျ။
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ဒီတဈပတျအတှကျ နားထောငျစရာသီခငျြးတှေ တဈပုံတဈပငျရလောကျပွီပေါ့နျော။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီလောကျနဲ့ပဲနားလိုကျကွရအောငျ။ နောကျတဈပတျမှ ထပျတှကွေ့မယျ။
Tags: billboard chart, entertaiment, Fun, Music, playlist, songs, TOP, trending
Stella March 15, 2019